Orinasa bateria LiFePO4, mpamatsy - Mpanamboatra bateria China LiFePO4
LiFePO4 bateria azo refesina vita am-bavam-bava azo jerena indray 26650 3.6V 5Ah Batterie finday ho an'ny Speaker Bluetooth, kilalao, Torolàlana elektrika, bisikileta
Ny bateria PLM-26650 3.6V 5Ah azo averina ampiasaina dia mampiasa fitaovana tsara indrindra manana fahaiza-manao avo indrindra azo trandrahana ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
LiFePO4 batterie azo refesina vita amin'ny famerenam-bolo indray 14500 3.7V 800mAh Battery Cell ho an'ny Speaker Bluetooth, kilalao ， Clock
Ny bateria PLM-14500 3.7V 800mAh azo averina ampiasaina dia mampiasa fitaovana tsara indrindra misy fahaiza-manao avo indrindra ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
LiFePO4 batterie azo refesina vita amin'ny famerenam-bokatra ihany koa 32700-4S 12.8V 6Ah Battery pack ho an'ny fitaovam-piadiana avo lenta amin'ny herinaratra
Ny bateria PLM-32700-4S 12.8V 6Ah azo ampiasaina indray dia mampiasa fitaovana tsara indrindra misy fahaiza-manao avo indrindra ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
3.2V 10Ah Deep Cycle Rithargeable Lithium Li-ion Battery 38120S / LiFePO4 Battery ho an'ny fametrahana kitay
Ny bateria PLM-38120S 3.2V 10Ah dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana tsara indrindra miaraka amin'ny fatran'asa mety indrindra ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
LCD Display 48 Volt Rechargeable Li ion Lithium 48V 200AH Lifepo4 Solika Baterin-tsolika Solar Telecom miaraka amin'ny BMS sy Charger
Ny bateria PLM-200A 48V 200Ah azo averina ampiasaina dia mampiasa fitaovana tsara indrindra misy fahaiza-manao avo indrindra ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Rechargeable Prismatic LiFePO4-3 Battery 24V / 36V / 48V 50Ah / 60Ah / 80Ah Battery Cell ho an'ny lakana, Fiara, Station Power Supply, E-bus
Ny batterie PLM-LiFePO4-3 24V / 36V / 48V LiFePO4-3h dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana mety tsara indrindra ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Rechargeable Prismatic LiFePO4 Battery 48V 100Ah Battery Pack ho an'ny sambo, fiara, toby famatsiana herinaratra
Ny batterie PLM-100A 48V 100Ah dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana tsara indrindra miaraka amin'ny fatrany avo indrindra mety ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Fahatsapana ho an'ny fitehirizana ny bateria fitehirizana Lithium Battery Cell Lifepo4 48V 25Ah
Ny batterie PLM-25A 48V 25Ah dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana tsara indrindra miaraka amin'ny fatrany avo indrindra mety ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
LiFePO4 batterie azo refesina vita amin'ny famerenam-bolo indray
Ny batterie PLM-32650 3.2V 6Ah azo averina ampiasaina dia mampiasa fitaovana tsara indrindra misy fahaiza-manao avo indrindra ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
LiFePO4 batterie azo refesina azo trandrahana 3.2V 26Ah sela bateria ho an'ny sambo ， fiara, E-bisikileta
Ny bateria PLM-26A 3.2V 26Ah dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana mety tsara indrindra miaraka amin'ny fatran'asa mety indrindra ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.